I-Malá Praha embindini we Žilina - I-Airbnb
I-Malá Praha embindini we Žilina
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarek
Ukuze ndonge imali kwiihotele, ndayilungisa ngo-2012 iflethi yesibini kwigumbi elingaphantsi lendlu yethu ukuze ndibe nendawo yokuhlala amagcisa nabantu abenza imisebenzi ezayo kwiStanica Cultural Centre apho ndisebenza khona. Xa ifumaneka simahla, abahambi nezinye iindwendwe zamkelekile.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex etofotofo ekwicomplex (engaphantsi komhlaba) yendlu yethu inika abahambi nabazobi amagumbi ayi-3 amancinci alala abantu ababini, ikhitshi negumbi lokuhlambela eliyi-3. Indawo yaphantsi imalunga ne-50 square metre, ngoko unokucinga ngobukhulu. Iibhedi kuwo onke amagumbi zinokudityaniswa zibe mbini okanye zohlukaniswe zibe nye.
Le flethi ikumbindi we Žilina, kwikota ethe cwaka kunye nezindlu zentsapho ezibizwa ngokuba yiMalá Praha (Little Prague), uhamba imizuzu emihlanu ukusuka kwisikwere sembali kunye nazo zonke iindawo zenkcubeko. Le ndlu yakhiwa ngo-1935 ngendlela eyakhiwe ngayo. Sikunye nomcebi, siye sayilungisa yonke indlu ngo-2012 saza senza igumbi elingaphantsi lale flethi okanye indlu ekwicomplex elungiselelwe abahlobo kunye nabazobi bethu baseStanica Cultural Centre, apho ndisebenza khona.
Kumagumbi okulala ayi-3 kukho iibhedi eziyi-6 (ezinamathuba okuzijoyina zibe ziibhedi ezilala abantu ababini eziyi-3), ikhitshi elinento yonke, igumbi lokuhlambela kunye nezindlu zangasese eziyi-2. Zonke izixhobo kunye neebhedi zintsha kunye nematrasi ye-foam esemgangathweni ukwenzela ukulala kamnandi. Iflethi inendawo yokungena esecaleni eyadini. Incinci kodwa intle.
Le flethi inikezela ngendawo yokuhlala engaduriyo ukuba ufuna ukuhlala e Žilina iintsuku eziliqela - njengomkhenkethi okanye kuhambo lwezoshishino. Esona sikwere sembali sedolophu ngumgama wemizuzu eyi-5 wokuba ungahamba ngeenyawo, Iziko Lenkcubeko laseStanica okanye iSinagoge elitsha elinemicimbi yemihla ngemihla.
4.88 · Izimvo eziyi-247
I-Malá Praha (i-Little Prague) yindawo yezindlu zosapho ezisebenzayo nezindlu ezinendawo yokuphola eyakhiwe ngoo-1930 embindini we Žilina. Yenye yezona ndawo zifanelekileyo zokuhlala e Žilina, njengoko isembindini wesixeko ikufutshane (uhamba imizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10), kodwa ukwindawo ethe cwaka.
Ndihlala kwindlu enye nosapho lwam, ngoko ke sikhona ukuze sikuncede ukuba kukho nantoni na efunekayo, kodwa iflethi inendawo yokungena eyahlukileyo, ngoko ukuba awufuni ukudibana nathi, ungakhathazeki - awuyi. Igadi yendlu yindawo yethu yabucala, ngoko nceda uhloniphe lo mthetho. Ndiza kukuvuyela ukudibana nawe ndize ndikubonise indawo, ngokukhethekileyo kubomi benkcubeko, ubugcisa bale mihla okanye ukhenketho lokunyuka intaba okanye ukutyibilika ekhephini ebusika e-Žilina (iintaba zintle apha).
Ndihlala kwindlu enye nosapho lwam, ngoko ke sikhona ukuze sikuncede ukuba kukho nantoni na efunekayo, kodwa iflethi inendawo yokungena eyahlukileyo, ngoko ukuba awufuni ukudibana…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Žilina